दैनिक ३ करोडभन्दा बढीको बिजुली खेर जाँदै - khull Postदैनिक ३ करोडभन्दा बढीको बिजुली खेर जाँदै - khull Post
काठमाण्डौमा सभा, जुलुस र प्रदर्शन गरे कारबाही हुने १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:२८
रोजगारीका लागि ओमान खुला, नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने १६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:०१
सालकको खपटासहित काठमाडौंबाट दुई पक्राउ १६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०७:५८
आज ३३ औँ विश्व एड्स दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै १६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०७:४८
नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, ओली र दाहालको प्रस्तावमा छलफल हुने १६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०७:३४
आउँदा दिनमा कोरोना संक्रमण थप तीव्र हुने डा. एन्थोनी फाउचीको चेतावनी १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:२८
आज ३९६ पालिकामा एकैसाथ अस्पताल शिलान्यास हुँदै (सूचीसहित हेर्नुहोस्) १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:१६
आज गुरुनानक जयन्ती मनाइँदै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:०१
पुरुषोत्तम ढकाल १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:५७ 60 Views
काठमाडौं: यो साता केही दशैंका कारण विद्युतको माग धेरै कम भयो । सामान्यतयाः दशैंका बेलामा यसरी बिजुलीको मागमा भारी कमी आउँछ ।
दशैंका कारण दिनमा ३० लाख युनिटभन्दा बढी बिजुली खेर (स्पिल) जाँदैछ । अहिले दैनिक ३ करोडको बिजुली खेर जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग न तत्कालै खपत बढाउने न कुनै विकल्प छ, न त भारत नै पठाउन सकिने अवस्था नै ।
प्राधिकारणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अहिले दिउँसो २०० मेगावाट राती ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको छ ।
बिहान र बेलुकाको पिक समयमा भने अधिकतम् रुपमा नेपालबाट उत्पादित सबै बिजुली उपयोग हुन्छ । थोरै परिमाणका मात्रै भारतबाट बिजुली ल्याउँदा पिक आवरको माग धानिन्छ ।
भट्टराईका अनुसार हिजोआज साँझको पिक आवरमा १२ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । दिउँसो ७ सय मेगावाटसम्म माग हुन्छ । राति ५ सय देखि साढे ५ मेगावाटमा झर्छ ।
हरेक घण्टा बिजुलीको मागको ‘परिमाण’ परिवर्तन हुने हुँदा घरी भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्ने, घरी भएको पनि खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । बिहारमा बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने भएपनि यो वर्ष बिहार सरकारले पनि बिजुली लिन चासो देखाएको छैन ।
प्राधिकरणलाई यसरी खेर गइरहेको बिजुली अहिले सबभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । प्राधिकरणलाई अबको केही हप्ता खपत र निर्यात नभएर खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन समस्याको विषय बन्ने देखिएको छ ।
यो वर्षको राम्रो वर्षापछि नदीहरुमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढेको छ । देशभित्र उत्पादन बढेकाले भारतबाट आउने बिजुलीको परिमाण ह्वात्तै घटेको छ ।
राति ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माग घट्ने भएकाले अहिले पनि लाखौं युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ । दशैंको बेलामा त झन दिउँसो पनि बिजुली खेर जाँदै छ ।
लकडाउनपछि कलकारखाना, होटल पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विद्युत माग बढ्न सकिरहेको छैन । दशैं–तिहारमा धेरैजसो उद्योग–कलकारखाना पनि अब बन्द हुन्छन् । बिजुली उत्पादन भने नदीहरुमा सफा पानीको बहावले गर्दा पनि अझ बढेको छ ।
यी विविध कारणले अबको करिब एक महिना बिजुलीको माग/खपत घट्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा अबको केही महिना प्राधिकरणलाई धेरै बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती हुनेछ ।
प्राधिकरणले माग भन्दा उत्पादन धेरै भएपछि आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरु बन्द गर्नुपरेको छ । यसो गर्दा बिजुली खेर जान्छ ।
प्राधिकरणले दिउँसो आन्तरिक उत्पादनले नथेग्दा कुनै–कुनै घण्टा एक सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट ल्याइरहेको छ । साँझको पिक आवरमा माग बढ्दा करिब २५० मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ ।
अहिले रातको सयममा करिब ५ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । जबकी नेपालमा प्राधिकरणका आफ्ना र निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीमा निरन्तर उपलब्ध हुँदैछ ।
निजी क्षेत्रले करिब ६ सय मेगावाट र प्राधिकरणका आयोजनाहरुले ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली निरन्तर उत्पादन गर्न सक्छन् । कुलेखानीको १०६ मेगावाट यसमा जोडिएको छैन । उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन हजार मेगावाटसम्म बिजुलीको माग अत्यावश्यक छ ।
प्राधिकरणले निजी उत्पादकका बिजुली लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेको छ । निजी उत्पादकहरुको बिजुली नलिए पनि त्यसको बिल तिर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरु बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्ने गरेको छ ।
३०० मेगावाटआवर बिजुली एक घण्टा खेर जाँदा ३० लाख युनिट खेर जान्छ । ३० लाख युनिट बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणलाई करिब ३ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । राति ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माग घट्ने भएकाले यसअघि पनि लाखौं युनिट बिजुली खेर गइरहेको थियो ।
अहिले वर्षा रोकिएर नदीहरुमा पानी संग्लिएपछि रातको समयमा खेर फाल्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण थप बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । कात्तिक, मंसिर र पुस मध्यसम्म नदीहरुमा सफा पानीको अवरोधरहित बहाव हुँदा धेरै बिजुली खेर फाल्नुको विकल्प छैन ।
विगतका गत वर्षामा आयोजनाहरू चलाएर करोडौं बिजुली भारतमा पठाइएको थियो । अहिले दैनिक केही समय भारतको बिहारबाट बिजुलीको माग हुँदा निर्यात पनि गरिन्छ । भारतबाट बिगतमा जसरी माग भएको छैन ।
यो वर्ष बिहारमा पनि बिजुली खपत घटेको छ । सरकारी स्तरमा समझदारी नभएकाले नेपालको खेर जाने बिजुली किन्न भारत बाध्य छैन । यसअघि पनि प्राधिकरणकै पहलमा बिहारमा बिजुली पठाइन्थ्यो । तर, अहिले प्राधिकरणमा विगतमा जसरी पहल गर्नसक्ने नेतृत्व पनि छैन ।
खेर जाने बिजुली बिहारमा बिजुली बेच्न दैनिक रुपमा त्यहाँका अधिकारीसँग छलफल र सम्वाद गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्राधिकरणमा त्यस्तो समन्वय गर्न सक्ने किसिमको नेतृत्व छैन । यो अघिल्लो वर्षको वर्षातमा प्राधिकारणले ८० करोडभन्दा बढीको बिजुली भारत पठाएको थियो ।
नयाँ अड्चन नथपिए आगामी पुससम्म माथिल्लो तामाकोसी आयोजना (४५६ मेगावाट)बाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । अबको एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाउने सरकारी लक्ष्य छ । अहिले २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३५० युनिटमा पु¥याउने योजना छ ।
तीन वर्षअघि यस्तो खपत १५० युनिट थियो । सरकारको लक्ष्य पूरा हुन अबको दुई वर्षमा यस्तो खपत दर ७०० युनिट पुग्नुपर्छ । तर, देशभित्र ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति यही वर्ष आएन ।
इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयले आन्तरिक खपत निरुत्साहित भएको ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालले कि ठूलो मात्रामा आन्तरिक बिजुली खपत बढाउनु, कि त भारतीय बजारमा बेच्नुको विकल्प छैन ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई भारतको बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा बिजुली बेच्न पूर्वस्वीकृति त दिएको छ, तर भारतले अहिलेसम्म आफ्नो बजारमा प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको छैन । भारतको ‘एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम लिमिटेड’ (एनभीभीएन)सँग यसबारे छलफल भइरहेको दावी सरकारको छ ।
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत ब्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार विदेशबाट ल्याएको बिजुली सीधै बेच्न पाइँदैन । विदेशी विद्युतको व्यापार एनभीभीएनमार्फत मात्र गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
प्राधिकरणले एजेन्सीका रुपमा एनभीभीएनसँग काम गर्ने सहमति गत वर्ष जनाएको छ । अब निर्देशिकाअनुसार भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गर्न बाँकी छ ।
तर, नेपालमा भने दैनिक करोडौंको बिजुली उत्पादन हुने आयोजना बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ ।
काठमाण्डौमा सभा, जुलुस र प्रदर्शन गरे कारबाही हुने
सालकको खपटासहित काठमाडौंबाट दुई पक्राउ
आज ३९६ पालिकामा एकैसाथ अस्पताल शिलान्यास हुँदै (सूचीसहित हेर्नुहोस्)
चिनियाँ रक्षामन्त्री आज नेपाल आउँदै, उच्चस्तरिय भेटवार्ता हुने
रोजगारीका लागि ओमान खुला, नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने
आज ३३ औँ विश्व एड्स दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै
नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, ओली र दाहालको प्रस्तावमा छलफल हुने
आउँदा दिनमा कोरोना संक्रमण थप तीव्र हुने डा. एन्थोनी फाउचीको चेतावनी
आज गुरुनानक जयन्ती मनाइँदै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त